ကိုယ်ဝန်လွယ်ထားပြီး လက်ထပ်ခါနီးစုံတွဲ မိဘချင်းပေးတွေ့မှ မောင်နှမဖြစ်နေမှန်း သိလိုက်ရ ~ Myanmar Express
လောကကြီးဟာ ဆန်းကြယ်လွန်းတယ်... မရည်ရွယ်ပေမယ့်လည်း လူသားတွေကို အပြစ်တွေကျူးလွန်မိစေတယ်။ တိုက်ဆိုင်မှုတွေကလည်း တခါတလေမှာ ထူးဆန်းလွန်းလှပါတယ်။ ဒီဖြစ်ရပ်မှာ ပါဝင်တဲ့ စုံတွဲဟာ တခြား သာမန် လူတွေလိုပါပဲ... တက္ကသိုလ်မှာ ကျောင်းတက်ရင်း နှစ်ဦးသားတွေ့ခဲ့ရာကနေ ချစ်ကြိုက်မိပြီး ငါးနှစ်ကြာ အတူနေထိုင်ခဲ့ပါတယ်။ ကောင်မလေးက ကိုယ်ဝန်လွယ်ထားတာ နောက်လထဲ မွေးဖွားရတော့မယ့် အခြေအနေမှာ သူတို့နှစ်ယောက်ဟာ လက်ထပ်ဖို့ ဆုံးဖြတ်လိုက်ကြပြီး သူတို့ဆီက ထုံးစံအတိုင်း မိဘချင်းပေးတွေ့ပြီး လက်ထပ်ကိစ္စစီစဉ်ဖို့ လုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။ အဲဒီမှာပဲ သူတို့နှစ်ယောက်ဟာ နှစ်ပေါင်းများစွာ ကွဲကွာနေခဲ့ကြတဲ့ မောင်နှမတွေမှန်း သိခဲ့ကြရပါတယ်။ သူတို့နှစ်ဦးစလုံးကို ယခုချိန်ထိ မိဘတစ်ဦးစီက ကျွေးမွေးစောင့်ရှောက်ခဲ့ကြပြီး ကောင်လေးက သူ့တို့အဖေနဲ့ ကောင်မလေးက သူတို့အမေနဲ့ ကြီးပြင်းခဲ့ကြတာပါ။ သူတို့ အဖေနဲ့ အမေဟာ ကောင်လေး အသက် ၂နှစ်ခန့်အရွယ်၊ ကောင်မလေး အသက် ၈လအရွယ်ခန့်မှာ အငြင်းပွားဖွယ် လင်မယားကွဲကွာခဲ့ကြပြီး အဲဒီတုန်းက အဖေဖြစ်သူက အမေဖြစ်သူကို သူ့အပေါ်လိမ်ညာနေတယ်လို့ ပြောပြီး ၁၉၈၃ခုနှစ်ကတည်းက သူမကိုစွန့်ခဲ့တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ ကောင်လေးနဲ့ ကောင်မလေးနှစ်ယောက်လုံး သူတို့မှာ မောင်နှမရှိခဲ့ကြမှန်း လုံးဝ မသိခဲ့ပါဘူး... သူတို့နှစ်ယောက်လုံး အခုချိန်ထိ အံ့သြပြီး ရှော့ခ်ဖြစ်နေတဲ့ အနေအထားမှာ ရှိနေတုန်းပါပဲ... ကောင်မလေးက ရှင်းပြရာမှာ ကျွန်မတို့နှစ်ယောက် မြင်မြင်ချင်း ချစ်ကြိုက်ခဲ့တာပါ။ အဲအချိန်ကစပြီး ကျွန်မတို့ ရှေ့ရေးအတွက်ပဲ စဉ်းစားခဲ့ကြပြီး ဘယ်တော့မှ နောက်ပြန်ဆုတ်ဖို့ မစဉ်းစားခဲ့ကြပါဘူး.. ကျွန်မတို့ ကလေးတွေ အများကြီးယူပြီး ပျော်ရွှင်စရာ မိသားစုလေးတစ်ခုကို ဖန်တီးဖို့ ရိုးရိုးလေးပဲ စိတ်ကူးယဉ်ခဲ့ကြပါတယ်။ အခုဒါကို သိလိုက်ရတဲ့အချိန်မှာ ဘာပြောလို့ ဘာလုပ်ရမှန်းတောင် မသိတော့လောက်အောင် ခံစားရပါတယ်။ ကောင်လေးကတော့ ကွဲကွာနေတဲ့ မိသားစုနှစ်ခုနဲ့ ဒီပြဿနာကို ဖြည်းဖြည်းချင်း ဖြေရှင်းသွားမယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ လောလောဆယ်တော့ လက်ထပ်ဖို့ကိစ္စကို လုံးဝ ဖျက်ပစ်လိုက်ကြပါပြီး... သူတို့လူမှုအဖွဲ့အစည်းမှာတော့ သွေးနီးချင်း နှီးနှောတာကို လုံးဝလက်မခံတတ်ပါဘူး... ဒါဟာ စဉ်းတောင်မစဉ်းစားသင့်တဲ့ ကိစ္စလို့ ယုံကြည်ထားတဲ့ လူတွေဖြစ်ပါတယ်။ ဗြိတိန်က ဆေးဂျာနယ်ရဲ့ သုတသနမှာတော့ ဒီလိုကိစ္စဟာ မောင်နှမအရင်း၊ တစ်ဝမ်း နှစ်ဝမ်းကွဲမောင်နှမတွေ တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက် မသိကြဘဲ ကြီးလာမှ ပြန်တွေ့ကြတဲ့အခါ ကာမရာဂနဲ့ ချစ်ကြိုက်မိတဲ့ စိတ်တွေ ဖြစ်ပေါ်တတ်ကြတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ ဒီလို မောင်နှမနဲ့ ၀မ်းကွဲအချင်းချင်း အတူကြီးပြင်းခဲ့ရင်တော့ ဒီစိတ်တွေဟာ သွေးချင်းနှီးနှောလို့ မသင့်တော်ဘူးဆိုတဲ့ အသိစိတ်နဲ့ ကာမရာဂစိတ်တွေကို တွန်းလှန်ပြီးသား ဖြစ်သွားတယ်လို့ ဒီသုတေသနက ဆိုပါတယ်။ ဒီကိစ္စနဲ့ ပက်သက်ပြီး ဒါကို သူတို့က Genetic Sexual Attraction (GSA) လို့ အမည်ပေးထားပါတယ်။ အောက်မှ အသေးစိတ် ရှင်းပြထားပါတယ်။ ဘာသာတော့ မပြန်တော့ဘူး... သတင်းဖတ်ပြီး ကိုယ်တိုင်လည်း အင်မတန်မှ ရှော့ခ်ရပြီး ကြောက်စရာကောင်းတယ်လို့ မြင်ပါတယ်။ ကိုယ်တွေ ဗုဒ္ဓဘာသာအမြင်နဲ့ဆိုရင် ၀ဋ်ကြွေးလို့ပဲ ပြောရမလားပါပဲ။ THE POWER OF GENETIC SEXUAL ATTRACTION Genetic Sexual Attraction (GSA) isaterm that describes the phenomenon of sexual attraction between close relatives, such as siblings, first and second cousins oraparent and offspring who first meet as adults. It is not the same as incest, though this is what it is called ifasexual relationship is then entered into. The term GSA was coined 30 years ago by American Barbara Gonyo. She wroteabook about the lust she felt for the adult son she had given up for adoption 26 years earlier. She never acted on her feelings. GSA is rare between people raised together in early childhood due toareverse sexual imprinting known as the Westermarck effect, which desensitizes them from sexual attraction. Experts believe that this effect evolved to prevent inbreeding. News Source:http://www.dailymail.co.uk/news/article-2057081/Engaged-couple-disc... သတင်းကိုဖတ်ပြီးတော့စိတ်မကောင်းပါဘူး Myanmar Express
2 June 2012 18:47
အင်းတကယ်ကိုသနား စရာ ပါ
လာဘ် မရှိဘူး ။
10 June 2012 16:30
ကိုယ်တွေ ဗုဒ္ဓဘာသာအမြင်နဲ့ဆိုရင် ၀ဋ်ကြွေးလို့ပဲ ပြောရမလားပါပဲ။ (ဗုဒ္ဓနဲ့ယသော်ဓရာ ဘာတော်သလဲ ) အာနန္ဒာက ဘယ်သူ့ ကို လက်ထပ်ခဲ့ တာလဲ။ စဉ်းစားပါ။ မသိလျင် မေးပါ။
14 June 2012 17:59
အင် ထူး ခြားဆ န်းပြား တဲ့ ဖြစ်ရ ပ်ေ တွဘဲ ဒါပေမဲ စောင့်ထိ န်းသ သည်များ ကိုစောင့်ထိ န်းရင် ဒါတွေ မဖြစ် ဘူးပေါ့
14 June 2012 20:49
ဟယ်ဒါဆိုရင်တော့ သွားပြီ ပေါ့ နော် .....
ကောင်မလေးက ကိုယ်ဝန်ကိုလွယ်ထားရပြီလေ ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲဆိုတာကိုတော့ သေသေချာချာဆုံးဖြတ်သင့်တယ်မြန်မာလိုအယူအရတော့ မောင်နှမချင်း မယူသင့်ဘူးအခုကမသိလို့ဖြစ်ခဲ့တဲ့အတိတ်ကိုမေ့ပြီးမောင်နှမလိုဘဲနေသင့်တယ်လို့ထင်တယ်
မသိလို့နေခဲ့ကြပြီးပြီပဲ...ယူသင့်တယ်.... မသိခဲ့လို့ သိရင်ပြင်ဆိုတဲ့စကား ကတော့မှန်ပါတယ်ဒါပေမယ့် ဒါက ပြင်လို့မရတဲ့အမှားလေ.. ဒါမှမဟုတ်ကလေးကိုသတ်တော့မှာလား... စခဲ့ကြပြီးပြီ.. ဆက်လိုက်ပါတော့ ... သေချာလက်ထက်ပြီး အိမ်ထောင် ထူထောင်ပါ
27 June 2012 11:50
အကောင်းဆုံး ဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်ပါစေ ဘ၀ဆက်တိုင်း ဒီအဖြစ်တွေ ကင်းဝေးစေဖို့ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်
28 June 2012 19:40
u thint te
ကမ္ဘာပတ်ပတ်လည်း ဒီလိုအဖြစ်တွေ ကင်းဝေးကြပါစေ
3 October 2012 15:53
living-together စနစ်ကြေညင့်ဖြစ်တာပါ သေချာစဉ်းစားကြည့်ကြပါ ။မြန်မာ နိုင်ငံမှာလဲ အလားတူ အဖြစ်ပျက်မျိုးတွေ မကြာခင် ဖြစ်ကြတော.မှာပါ။ ရန်ကုန်မြိုပေါ်မှာ ဈေးပေါတဲတည်ခိုခန်းတွေကလည်း ပေါ။ သမီးရည်းစာတွေကလဲ စောင့်ထိမ်းသင့်တဲ့ အကျင့်တွေကို မစောင့်ထိမ်း ရိုးရာယဉ်ကျေးမှုတွေ တိမ်ကောလာတာနဲ့အမျှ ဒီလိုအဖြစ်ပျက်တွေ ၊ ကုလိုမရတဲ့ ရောဂါတွေ၊ ဒီထက်ဆိုးတာတွေပါ မကြာခင် ကြုံကြတော.မှာပါ။
4 October 2012 19:28
ur all comments that they can't know ,,,,, funny u all
9 February 2013 19:09
ရခိုင်ဆိုတာ မွန်မြက်တဲ့မျိုးနွယ်စုပါ။ရခိုင်ဖြစ်ရတဲ့အတွက် ဂုဏ်ယူပါတယ်။
အ၇င်ဘ၀၇ဲ့ အကြာင်းတွေပေါ့ 
ဗဟိုဘဏ်မှ ထပ်မံဈေးတိုး သတ်မှတ်၍ တစ်ဒေါ်လာ ၉၄၈ ကျပ်အထိမြင့်တက်
ဗဟိုဘဏ်မှ နေ့စဉ်ငွေလဲနှုန်း သတ်မှတ်ပေးရာတွင် မေ ၁၃ ရက်က တစ်ဒေါ်လာလျှင် ၉၀၄ ကျပ် သတ်မှတ်ခဲ့ရာမှ မေ ၁၄ ရက်က တစ်ဒေါ်လာ ကျပ် ၉၁၀ အထိ ဈေးဆွဲတင် သတ်မှတ်ခဲ့သည်။